संसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्र हुने यस्तो चिन्ह, तपाईकोमा पनि छ की ? - समृद्ध नेपाल
मलाई यो जाडोमा धेरै गर्न मन लाग्छ किन होला ? मलाई सम्पर्क गर्नु चाहानु हुन्छ नम्बरको लागि फोटोमा क्लिक गरेर OPEN लेख्नु होस् !
मन मिले के हुदैन सबै हुन्छ मन मिल्नेलाइ सबै दिन्छु सम्पर्क नम्बर सहित !
श्रीमानले मेरा इच्छा पुरा गरेनन् के गर्ने होला..?
यसरि गर्नुहोस से क्स एक चोटिमा २५ मिनेट सम्म टिक्न सकिन्छ पूरा भिडियो सहित हेर्नुहोस !
मलाई यो जाडोमा संगै घुम्ने जोडी चाहियो नम्बरको लागि फोटोमा क्लिक गर्नु होला !
म’हिलालाई तपाइँले यस्तो बेला सम्पर्क गर्ने प्र’स्ताब राख्नुहोस् नाइ भन्दैनन् ! जन्नुहोस समय
यी १२ चीजसँग दुधको सेवन भूलेर पनि नगर्नुहोस् , नत्र छालामा आउँछ यस्तो परिवर्तन !
कुन चाही हजुरहरुलाई मन पर्यो मन परेकोलाई छुएर कमेन्ट गर्नु होला अनि हेर्नुहोस रिपलाई के आउछ !
नेपाली हरुको सानो हुन्छ मेरो चित्त नै बुझ्दैन किन होला !
भारत–पाक विभाजनको बेला छुट्टिएका दाजुभाईको जब ७४ वर्षपछि पुनर्मिलन भयो…